FBC - Qaamotni faallaa dantaa Oromoo dhaabbatan tasgabbiisaa hin fedhan -mootummaa naannoo Oromiyaa
FBC Wiixata Bitootessa 10 2010 E.C. - Monday, March 19 2018 G.C.
Ministeerichii fi Yuunvarsiitin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa waliigaltee hojii walii mallatteessan
Seeronni hariiroo hawaasaa 4 fooyya’uufi
Gurgurtaan boondii torbee hidha Haaromsaa eegale
Finfinneetti manneen barnootaa dhuunfaa 22 moodeela gochuuf hojjetamaa jira
Gorsiitootni nageenya Ameerikaa, Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan mari’achaa jiru
Qaamotni faallaa dantaa Oromoo dhaabbatan tasgabbiisaa hin fedhan -mootummaa naannoo Oromiyaa
Finfinnee, Onkololeessa 2,2010(FBC) –Qaamotni faallaa dantaa Oromoo dhaabbatan Oromiyaan akka hin tasgabboofne barbaadu jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa.
Ummanni tokkummaa akka hin qabaanne, hoggansa isaa waliin waldhaghee fuulduratti akka hin tarkaanfanne godhuuf shira xaxaa akka jiranis yeroo addaa addaa isamaa tureera jedhan hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaan.
Ayyaana Irreechaa malakaawwan addaa addaatti dhiyoo kana kabajamettis kallattii Gumiin Abboottii Gadaa Oromoo kaa’e cabsuun, waan qabsoo Oromootif quuqaman fakkeessuun alaabawwan dhoorkaman qabachuun, dhaadannoowwan dhageessisuun jeequmsi akka ka’uu fi dhiigni ilmaan Oromoo akka dhangala’u yaalii cimaa taasisaa turanis jedhan.
Yaalin jeequmsaa kabaja ayyaana Irreechaa bara kanaa irratti taasifame tumsa ummataa, foollee fi poolisii Oromiyaatin akka fashalaa’u ta’eera.
Yeroo ammaa kana ammoo humnootni faallaa faayidaa ummataa dhaabbatan waan qabsoo ummataa deggeran fakkeessuun, “Hoggansa mootummaa naannoo Oromiyaatiif deeggersa keenya ibsina.” karaa jedhuun bakka adda addaatti hiriira waamaa jiru jedhan obbo Addisuun.
Hiriirri waamamaa jiru kun hiriira nagayaatii miti kan jedhan obbo Addisuun, hiriira shiraa fi hiriira jeequmsaa akka ta’es hubachiisaniiru.
Dargaggoon Oromoo namoota shira akkasii xaxanii Oromiyaa dirree jeequmsaa taasisuuf deeman irratti dammaaquu qaba.
Miira irraa bilisa ta’ee dubbii bilchinaan ilaaluu danda’uutu irraa eegamas jedhan.
Hoggansa Mootuummaa Naannoo Oromiyaa kan deeggaru, nagaa tasgabbii uumudhaan, dubbii miira irraa bilisa taanee hubachuudhaan ta’uu danda’uu qabaanis hubachiisaniiru.
Kanaafuu, daragaggoonni Oromoo hundi dhimma hiriira jedhamee waamamaa jiru kun diinaaf haala mija’aa kan uumu hiirira jeequmsaa balaa guddaa nutti fidu ta’uu hubachuun irraa of qusachuu qabna jedhan.
Namoota hiriira kakaasanis saaxiluun barbaachisaa akka ta’e eeranii, deeggarsa, mormii fi qeeqa qaama fedhe irratti qabnu hunda karaa tasgabbii qabuun, karaa tokkummaa saba keenyaa hin diignen, karaa injifannoo ol’aanaatti nu ceesisuun ilaa fi ilaamedhaan dhiyeeffachuutu bu’aa qaabatas jedhan.
Oduuwwan Biroo « Rakkoon qonnaan bultoota naannoo warshaa Arjoo Dhidheessaa jiraatan ammas hin hiikamne	Dargaggoonni Oromoo Xaanaa baraaruf imala eegalan »
Oduuwwan Roobi Bitootessa 05 2010 E.C
Oduuwwan Roobii Galgala Bitootessa 05 2010.
Oduuwwan Roobii Ganamaa Bitootessa 05 2010.
Oduuwwan Kibxata Bitootessa 04 2010 E.C
Oduuwwan Kibxata Galgala Bitootessa 04 2010.
Oduuwwan Kibxata Ganamaa Bitootessa 04 2010.
Oduuwwan Wiixata Bitootessa 03 2010.
OduuwwanWiixata Galgala Bitootessa 03 2010.
OduuwwanWiixata Ganamaa Bitootessa 03 2010.
Oduuwwan Sanbata Dilbata Bitootessa 02 2010.
Oduuwwan Sanbata Duraa Bitootessa 01 2010.
Oduuwwan Sanbata Duraa Ganamaa Bitootessa 01 2010.